photo Claude Rakotobe (mada-sport.org)
Ho an’Antsirabe dia ady filaharana sisa no hihaonan’i Japan Actuel’s sy ny Akademie Ny Antsika, izay hatao amin’ny alahady ho avy izao. Ny FC Ihosy sy ny ASJF Capricorne kosa no efa any ami’ny ivon-toeram-pifaninanan’i Toliara. Ny tompondakan’Ihorombe no mitarika vonjimaika amin’ny alan’ny isa 11 amin’izany, izay manan-tombo isa tokana manoloana ny tompondakan’Atsimo Andrefana.
Nandalo fotoan-tsarotra kosa, saingy efa manomboka mihiratra ny masoandron’ny Ajesaia any Antsiranana noho ireo faharesena indroa nisesy nanjo azyt ireo tamin’iny alalan’ny « tir au but ». Amizao dia tafiditra ho laharana faharoa vonjimaika aorian’ny Ascum ity solontena faharoa ho an’Analamanga ity. Hiady ny ho voalohany any amin’ny vondrona C, izay any Toamasina, kosa ny Cnaps Sport sy ny FCE amin’ny alahady.